Atrikasa momba ny hetra: « Mety hahavery vola amina miliara ny fifanarahana » | NewsMada
Atrikasa momba ny hetra: « Mety hahavery vola amina miliara ny fifanarahana »
Natomboka, omaly, hatramin’ny 21 septambra ny atrikasa iraisam-pirenena ho an’ireo tany mampiasa teny frantsay mifanakalo traikefa momba ny hetra, indrindra fa ny aty Afrika, kely fidiran-ketra. Mitarika izany ny OIF (1) miara-miasa amin’ny FMI, ny Banky iraisam-pirenena, ny Comesa (2), ny UEMOA(3), ny DFI(4) ary ny LES (5).
Tambajotra ifandraisan’ireo minisitra sy manam-pahaizana momba ny fitantanam-bola amin’ny tany mpikambana ao amin’ny OIF ny fisian’izao atrikasa izao ho fanatsarana ny fidiran-ketra. Atrikasa miainga avy amin’ny fanadihadiana, natao ny taona 2014 avy amin’ny vola niditra sy atrikasa roa natao tany Dakar sy Abidjan, ny taona 2015 sy 2106. Koa tanjona amin’izao fihaonana eto izao ny fizahana izay mety ho tombony sy lesoka momba ny fifanarahana misy amin’ireo firenena nifanaraka ho fanatsarana ny hetra, ny amin’ny hoenti-miasa sy ny fandaharanasa, ary ny hahalalana izay tokony hifanampiana ao anatin’izany fiaraha-miasa izany.
Manome lanja lehibe ho an’ity sehatra ity ny eto Madagasikara, mampifandray izany amina raharahan-ketra maneran-tany sy ny ady atao amin’ny tsy fandoavan-ketra sy ny hosoka. « Tsy maintsy jerena ny hetra anatiny, satria iaraha-mahita ny fisian’ireo orinasa lehibe avy any ivelany sy ny eto an-toerana, miteraka resabe lazaina fa tsy ahazoana hetra firy noho ny fifanarahana isan-karazany. Ireny fifanarahana ireny no mety hahavery vola amina miliara », hoy ny tale jeneralin’ny hetra, Razafindrakoto Garisse. Koa izao atrikasa izao no hahafantarana, na nahazo tombony isika, na matiantoka tamina fifanarahana natao.
Mandeha ny fitsirihana ireo orinasa vaventy
“Ny ady atao amin’ny hosoka indray, misy orinasa lehibe 505 izao hanaovana fitsirihana eto an-toerana. Tsy hoe akory mpangalatra, na mpamitaka ireo fa mba hahitsy izay diso, tsy ho lasa lavitra loatra izay fahadisoana izay amin’ny fanambarana”, hoy ihany ny tale jeneralin’ny hetra. Telo herinandro izao, natomboka izany fitsirihina izany ary amin’ny volana novambra ny hahafantarana ny vokatra. Nohamafisin’ny tale jeneraly fa “manitsy no zava-dehibe fa tsy ny manasazy mba hisian’ny fidiran-ketra tsara sady maharitra”.
Taorian’ireny fitokonana ireny, nahemotra ny fe-potoana farany fandoavana izany, indrindra ho an’ireo mpandraharaha madinika. Ankehitriny, hita miverina izao ny ezaka any amin’ireo Ivonketra. Manahirana ny hoe ho tratra ny tanjona napetraka 12 % na 234 miliara ariary fa miezaka ny fanjakana ; ny azo antoka 11 %. Efa hita aloha ny 50 % amin’io tanjona napetraka io.